Kuda zvinhu kunge paperbag – Makuhwa.co.zw
PANE vamwe vakafara nevamwe vakagumbuka kuti ndakati Eriza bvisa yunifomu. Asi kutaura chokwadi, kupfeka kwevamwe vanhukadzi kunoshevedzera kuti, “Ndiri pano musandizeze”, hakutore mwoyo sekupfeka kwakatsiga.
Ichokwadi kuti kupfeka kwekusiya mukaka wakati waya, kana zvidya nedzimwe nyama dzinofanira kuvharwa pane vanhu zvakayanikwa pachena kunoita kuti vanhu vacheuke. Asi kuyanika kana kutengesa nyama kunokundwa nerunako rwusingashevedzere kuti “town here” rwakavhura door kuti chero anoda apinde kunge kombi.
Ndini chete here ndiri kuona kuyanikwa pachena kwenyama nevasikana nemadzimai? Pamwe pacho unonyara zvekushaya pekutarisa.
Ndakambotaura kuti mazamu basa rawo nderekuti vana vayamwe mukaka, asi zviri muHarare umu unobva washaya kuti munhu ari kuda kuyamwisa nyika yese here. Ndakanzwa vamwe vakadzi vachiti kune mumwe aive akasimudza mazamu kunge nyanga yechipembere, “Ende une simbi dzako.” Ko simbi dzako kana dzave kungofamba dziri pachena zvichiine hunhu here?
Chandakaona ndechekuti vakadzi vanofamba vakazviyanika mazamu kana zvidya nezviuno vari pabasa. Kare ndaiona vakadzi vanoita zvechipfambi vachishandisa zvipfeko kuti vakwezve varume. Vaipfeka hembe dzainzi “musandizeze.” Idzi dzaive hembe dzinotaura kuvanhu kuti ndiri pano, nditangei zvenyu ndinoda kuenda nemi kana muchida nyama yemunhu.
Zvino dzadzoka zvakare hembe idzodzo dzinomanikidza vanhu vari kuzvifambirawo zvavo kuti vatocheuka chete, kuti vatarise nekutarisisa, kuti vatorwe mwoyo, kuti vasvike pakuda kutaudza munhu iyeye akapfeka zvekuti “ndiri pano.”
Chandakaona ndichocho, kupfeka kwekuyanika nyama kunoshanda. Vanopfeka mupfekero iwoyo vanowana zvavanenge vachitsvaga. Vanowana vanovadenha, vanovanetsa kuti vavavhurire zvimwe zvakawanda kudarika zvavari kuvaratidza.
Asi chandakaona ndechekuti kana munhukadzi akapindwa nemweya wekutevedzera vamwe vakadzi vanoshandisa hembe kuti aonekwe – achapedzisira asisazive kuti oita sei nemiridzo, mashoko, kuteverwa nekutariswa kunoratidza kuti vanhu vari kuzviona kuti uri kuti, “ndiripo, nditangei musandizeze.”
Asika, kuda zvinhu kwedu kwanyanya. Tinoda zvinhu zvatisingazogona kumiririra. Tinoda minda yatisingazogona kusakura. Ndiko “kuda zvinhu kunge paperbag” kwachoka ikoku.
Ini handisi mupurisa wako kana wemapfekero ako, asi chakanaka chakanaka, imbwa haihukure sadza. Ndinokoshesa zvinhu zvakakosha. Ndinokoshesa Mwari.
Nguva zhinji tinotevedzera vanhu vatinoona vachiita zvinhu zvavo, asi isu tisingazive kuti vari kuitirei zvinhu izvozvo. Tinoparara nehunhu hwakadaro hwekungotevedzera. Ndinozviziva kuti kana Mwari neshoko ravo vasingareve chinhu kwauri, hazvigone kuti unzwisise kuti sei zvimwe zvinhu zvinenge kupfeka kwaEriza zvisingaite.
Kusvika Mwari vave chinhu chakakoshesesa muhupenyu hwako, uye wave kuvenga zvivi nekushaya hunhu, kusvika shoko raMwari rave kutonga kudarika dhora muhupenyu hwako, kusvikira wave kugona kuramba kutapirirwa nemabhisvo anopera kunaka paanopera uchida mufaro nehutsvene, kusvikira wave kuti zvinhu zvese hazvina basa kana zvichienzaniswa nekuziva Jesu, ndinozviziva kuti kuchena nekuonekwa muhupenyu hwako kuchange kuchibva pazvinhu zvisingade Mwari.
Kune vamwe vangu vanokurumidza kunyenama vachida kundinyararidza nekundiratidza mazino embada, asi haisi nyaya yechiKristu chete yandiri kutaura.
Inyaya yetsika nehunhu hunoyemurika, hunozadza mukombe. Ndinozviziva kuti tiri kutsvaga mari muHarare nekwese-kwese. Asi mari yekuridzirwa miridzo nekudonhedzerwa rute seunodyiwa nyama haina hupenyu. Uye akanga achiti handidyike, akazodyiwa zvese nenyanga dzake.
Ityai Mwari, uremekedze miviri yakasikwa nemufananidzo wake. Dzimwe sando dzamunopihwa ndidzo dzakakuvadza Jesu pamuchinjikwa.
Related Topics:Kuda zvinhu kunge paperbag!